Madaxweynaha Turkiga oo xariga ka jaray Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dalk Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo ah 25-ka Janaayo 2015 xariga ka jaray Isbitaalka Digfeer, kaasoo ay dib u dhistay dowladda Turkiga, si weynna loo qalabeeyey.
Isbitaalka Digfeer oo loogu magaca daray Recep Tayyip Erdogan ayna hadda ka howlgalaan dhaqaatiir farabadan oo Turkiga iyo kalkaaliyaal Soomaali iyo Turki ah ayaa maanta si rami ah xarigga looga jaray.
Madaxweynaha Turkiga ayaa markii uu soo gaaroonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wuxuu furay Terminal-ka cusub ee garoonka, kaasoo ay dhistay shirkad Turki ah oo maamusha garoonkaas.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay isbitaalka digfeer loogu adeegi bulshada Soomaaliyeed, isagoo dhigiisa Turkiga uga mahadceliyay dhismaha iyo qalabeynta isbitaalka Digfeer, isla markaana ay bushada Soomaaliyeed ay kaga maarmi doonaan inay caafimaad dalka dibadiisa u doontaan.
Madaxda Soomaaliya iyo Turkiga ayaa markaan kadib yeelan doona wadahadal toos ah, iyadoo la filayo iney kala saxiixdaan heshiisyo horumarineed, sida uu sheegay wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya, C/raxmaan Ducaale Beyle.